Afhayeenkii Aqalka Cad ee Maraykanka oo is casiley – Balcad.com Teyteyleey
Afhayeenkii Aqalka Cad ee Maraykanka oo is casiley
Sean Spicer Afhayeenkii Aqalka Cad ayaa subaxnimada Jimacada ku dhawaaqey in uu xilkiisi iska casiley. Is casilaadiisa ayaa timid kadib markii Trump u magacaabey Anthony Scaramucci in uu noqda madaxa xiriirka Aqalka Cad, taas oo Spicer ku tilmaamey khalad uu galay Madaxweynuhu.
Sean Spicer ayaa sheegay in Trump uu doonaayo in aanu is casilin ee uu la sii joogo, laakiin waa wakhti sax ah in aan is-casilo ayuu yiri.
Sida laga soo xiganayo Joornaalka New York Times Donald Trump ayaa Sean Spicer ka codsadey in u la sii joogo, laakiin wuxuu u sheegay in magacaabistiisi ee ninka la yiraahdo Scaramucci ay ahayd khalad weyn ooo uu galay.
Sean Spicer ayaa xiriirka uu lalalahaa saxaafadda Maraykanka ay ahayd mid aad u xun gaar ahaan kuwa Madaxweynuhu ugu yeero Fake News, waxaana lagu xusuusta sida loogu shactireysan jirey Barnaamijka maaweelada habwenkii ee SNL.
Shirsaxaafeedka todobaadlaha ah ee Aqalka cad ayaa joojiyey muuqaalada Video-ga waxaana loo bedalay cod keliya, inkasta oo maanta si Live ah ay dib ugu soo noqdeen.
Dawladda Somalia oo ku eedaysay Shirkadaha qaarkood inay Argagixisadda taageeraan.